200-125 300-115 200-105 200-310 640-911 300-075 300-320 300-360 642-998 QV_DEVELOPER_01 400-101 700-501 117-201 70-696 700-505 600-199 400-351 300-207 TE0-141 100-105 300-101 300-206 300-070 70-417 210-260 210-060 200-355 300-208 CISSP 300-135 210-065 300-209 70-243 70-480 CCA-500 2V0-621D 210-451 400-051 E05-001 1Z0-052 70-410 640-916 VMCE_V9 810-403 070-464 070-243 700-802 70-246 FCBA GPHR DEV-401 C2090-610 SY0-401 712-50 ADM-201 700-039 312-50 MA0-101 648-244 SK0-004 ASF 70-494 70-673 500-005 1Z0-060 C9560-503 640-875 N10-006 98-367 70-534 NS0-505 70-342 CHFP 070-410 640-878 1V0-603 1Z0-804 C8010-250 312-50V9 C2150-508 98-368 CLOUDF 70-411 70-461 220-901 70-488 070-341 PK0-003 E20-547 70-412 70-686 500-285 CISM 101-400 102-400 PDM_2002001060 JN0-100 642-883 CAP 070-347 Xasan Sheekh oo ka hadlay shir Madaxeedka IGAD iyo Xirnaanshaha Waddooyinka Muqdisho | UfeynNews.com
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo goor dhow shir jaraa’id ku qabtay Madaxtooyada Soomaaliya ayaa ka hadlay Shir madaxeedka IGAD ee todobaadkan ka dhacaya Muqdisho iyo tallaabooyinka la xiriira amniga ee ay dowladdu qaaday.
“Waxaa nagu soo fool leh shir aad iyo aad muhiim ah, madaxdii dalalka IGAD ayaa ku shiraya Muqdisho, arrin weyn taariikhda markii u horeysay ku shiraan waaye waliba heer madaxweyne, hada ka hor wasiirada arrimaha dibada IGAD ayaa halkan ku shiray”ayuu yiri Madaxweyne Xasan Sheekh.
Waxaa uu sheegay in ammaanka magaalada Muqdisho si aad ah loo adkeeyay, isagoo ugu baaqay shacabka inay la shaqeeyaan ciidamada ammaanka, ayna u dulqaataan mudada ay xiran yihiin waddooyinka.
“Cadaw badan oo dhib badan ayaa leenahay, sidaas darteed Amniga Muqdisho aad iyo aad ayaa dowladda u adkeysay, iyadoo kaashaneysa ciidamada AMISOM, amnigaas la adkeeyay waa garan karnaa dadka soomaaliyeed culeys dheeri ah ayuu ku yeelanaa, hadey ahaan laheyd xaga nolosha, dhaq dhaqaaqa dadka iyo isu socodka”ayuu yiri Madaxweyne Xasan Sheekh oo dulqaad ugu baaqay shacabka.
Madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday ayaa sheegay in shirkan uu ku soo aaday xilli maalmaha Ciida loo diyaar garoobayo, isagoo xusay in waqti aad u fog la qorsheeyay, isagoo intaa ku daray in shirka uu yahay mid muddo kooban soconayo.
Ciidamada Ammaanka ayaa shalay iyo maanta xiray inta badan waddooyinka Muqdisho, iyadoo loo diiday dhamaan gaadiidka, waxaana dadka ay maalayeen lugahooda.